Diyo post :: विश्वकपका पाँच दाबेदार देशहरु, कुन देशको कति प्रभावशाली खेलाडी ? विश्वकपका पाँच दाबेदार देशहरु, कुन देशको कति प्रभावशाली खेलाडी ? - Diyo post
विश्वकपका पाँच दाबेदार देशहरु, कुन देशको कति प्रभावशाली खेलाडी ?
काठमाडौँ ।भोलीदेखी शूरु हुने विश्वकप शुरु हुन केही दिनमात्रै बाँकि रहँदा विजेता को बन्ला भन्ने बारे सर्वत्र चर्चा हुन थालेको छ । संसारका फुटबल प्रेमीहरुको प्रमुख उत्सब नै हो विश्वकप । विश्वकप खेल्न छनोट भएका ३२ राष्ट्र वाहेकका छनोटमा नपरेका अन्य राष्ट्रका फुटवल प्रेमीहरु तेस्रो मुलुकको सपोर्टमा रहन्छन । केही स्टार खेलाडी र ति देशहरुको विगतका प्रदर्शनको हिसावले विश्वकप फुटबलका दाबेदार देशहरुलाई औँल्याउन सकिन्छ । यसपटकको विश्वकपमा डिफेन्डिङ च्याम्यिन ईटाली र नेदरल्याण्डसले खेल्न पाउने छैनन । विश्वकप छनोट चरणको खेलमा पराजित भएपछि यि दुई देशहरु यसपालीको विश्वकपमा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका हुन । त्यस्तै विश्वकप २०१४ मा सहभागी भएका घाना, चिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिका, अल्जेरिया, होण्डुरस, स्विडेन, आईभोरी कोस्ट, क्यामरुन, वोश्निया हर्जगोभिना लगायतका देशहरु यसपालीको विश्वकपमा देखिने छैनन । २०१४ को विश्वकपमा नदेखिएका राष्ट्रहरु पेरु, आईसल्याण्ड, पनामा, ट्युनिसिया, पोल्याण्ड, सेनेगल, लगायतका देशहरु यसपालीको विश्वकपमा देखिने छन ।
२१ औँ सस्करणको विश्वकप २०१८ संघारमै आईपुग्दा विभिन्न खालका विश्लेषण र टिकाटिप्पणीहरुले तिब्रता पाईरहेको छ । विश्वकपको बिजेता को वन्छ भन्ने विषयमा चर्का वहस पनि शुरु हुन थालेको छ । युवापुस्ताहरु त खेलको शुरुवात हुनुअघि नै विभिन्न देशका जर्शीद्धारा प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन । विश्वका चर्चित फुटबलरहरु लियोनल मेस्सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेईमार, लुईस स्वारेज, एन्टोनियो ग्रिजम्यान लगायतका स्टार खेलाडीहरु रहेकै देशले विश्वकप उठाउने पुर्व दावि गर्दछन । त्यसो त खेल सम्पुर्ण खेलाडीहरुको प्रस्तुतीमा भर पर्छ नकि एकजना स्टार खेलाडीको दममा । यसको ज्वलन्त उदाहरण यसअघिको विश्वकपलाई लिन सकिन्छ । विश्कप फुटबलको इतिहास हेर्दा सबैभन्दा बढि ब्राजिल विजेता बनेको देखिन्छ । विश्वका चर्चित फुटबलर पेले र रोनाल्डिनोको पुस्तामा ब्राजिलले फुटबलमा ईतिहास रचेको थियो ।
यहाँ २१ औँ विश्वकपमा देखिएका दाबेदार राष्ट्र र ति राष्ट्रमा भएका खेलाडीहरुको बारेमा केही जानकारी गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
जर्मनी यसअघिको विश्वकप विजेता राष्ट्र हो । अहिलेसम्मको ईतिहासमा जर्मनीले चार पटक विश्वकप जितेको छ । १९५४, १९७४, १९९० र २०१४ मा विश्वकप फुटबलको कप जित्न सफल भएको छ । टोनि क्रुस स्टार खेलाडी रहेको जर्मनीलाई राम्रो टिम स्पिरिट भएको टोलीको रुपमा लिईन्छ ।
विश्कपको शुरुअघि भएको मैत्रिपुर्ण खेलमा साउदी अरेबियालाई २–१ ले पराजित गरेको थियो भने अस्ट्रियासंग १–२ ले पराजित भएको थियो । जर्मनको रष्ट्रिय टोलीमा एन्टोनियो रुडिगर, जुलियन ड्रयाक्सलर, गोन्डोगन, टोनि क्रुस, ओजिल, थोमस मुलर, मारिओ गोमेज टिमो वेर्नर लगायतका स्टार खेलाडीहरु रहेका छन । २०१४ को विश्वकपको फाईनलमा अर्जेन्टिनालाई पराजित गरि विजेता बनेको थियो ।
विश्वप्रसिद्ध खेलाडी लियोनल मेस्सिको कप्तानमा रहेको राष्ट्र अर्जेन्टिना विश्वकपको दाबेदार टोलिको रुपमा रहेको छ । सन १९७८ र सन १९८६ को विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना सन २०१४ मा भने फाईनलमा जर्मनसंग पराजित भएको थियो । यसपटकको विश्वकप खेलिसकेपछि स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सिले फुटबलबाट सन्यास लिने घोषण गरिसकेका छन ।
फुटवलमा आक्रमक बनाउनको लागी यस टोलीमा विभिन्न प्रसिद्ध क्लवका प्रसिद्ध फुटबलरहरु रहेका छन । गोलकिपर रोमेरो भने शारीरिक अशक्तताका कारण यसपटकको खेलमा नदेखिने प्रशिक्षक जर्ज सम्पोलीले यसअघि नै जानकारी गराईसकेको छ । राष्ट्रिय टोलिमा लियोनल मेस्सी, गोन्जालो हिग्विन, सर्जियो एग्विएरो, रोजो, विगिला, वेनेगा, एञ्जल डि मारिया लगायतका प्रखर खेलाडीहरु रहेका छन ।
हालसम्मको फुटबल ईतिहासमा सबैभन्दा धेरै पटक विश्वकप विजेता वन्न सफल राष्ट्र ब्राजिललाई यसपटकको विश्वकपमा पनि दाबेदार राष्ट्रको रुपमा विश्वले हेरेको छ । चर्चित खेलाडी नेईमार रहेकै कारण पनि ब्राजिल दाबेदारको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ । सन १९५८, १९६२, १९७०, १९९४ र २००२ को विश्वकप विजेता बनेको ब्राजिल यसपटक पनि कप उचाल्ने दाउमा रहेको छ । यद्यपी २००२ पछि अहिलेसम्म ब्राजिल विश्वकपको फाईनलसम्म पनि पुग्न सकेको छैन ।
ब्राजिल स्टार खेलाडी नेईमार सहित थियागो सिल्भा, मार्सेलो, क्यासेमिरो, फ्रेड, पउलिन्हो,फर्नान्डिनो, विलियन, कउटिन्हो लगायतका सानदार खेल खेल्ने खेलाडीहरुले भरिपुर्ण रहेको छ ।
सन २०१० को विश्वकप विजेता स्पेन यसपटकको विश्वकपको उत्कृष्ट टोलिको रुपमा रहेको छ । विभिन्न फुटबल क्लवहरुको उत्कृष्ठ खेलाडीहरुले सुसज्जित भएको स्पेन यसपटकको विश्वकमा सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने लयमा रहेको छ । ]स्पेनको राष्ट्रिय टोलीको डिफेन्डरमा ड्यानी कारभ्याजल, सर्जियो रामोस, न्याचो गरि तिन जना खेलाडीहरु चर्चित फुटबल क्लव रियल म्याड्रिड बाट खेल्दै आईरहेका छन । त्यस्तै स्पेनिस क्लव वार्सिलोनाका मज्वुत डिफेन्डर जोर्डी एल्भा, जेरार्ड पिके र चेल्सीका एज्पेलिक्वेटा स्पेनको राष्ट्रिय टोलीमा रहेका छन ।
टोलीको मिडफिल्डमा वार्सिलोनाका बुस्केट्स र एनिएस्टा, एट्लेटिकोका साउल र कोके, वायर्न म्युनिखका थियागो, म्यानचेस्टर युनाईटेडका सिल्भा, र रियल म्याड्रिडका ईस्को, एसेन्सियो र लुकास रहेका छन । उत्कृष्ठ टिमको रुपमा हेरिएको स्पेनी टोलीको फरवार्डमा ईएगो अस्पास, रोद्रिगो, र डिएगो कोस्टा रहेका छन ।
सन १९९८ को विश्वकप विजेता फ्रान्स २०१८ को विश्वकपको लागी पनि दाबेदार राष्ट्रको रुपमा रहेको छ । यसअघिको विश्वकप २०१४ मा क्वाटर फाइनल सम्मको यात्रा तय गरेको फ्रान्सले युरो कप २०१६ मा पोर्चुगलसंग फाइनलमा पराजय भोगेको थियो ।
फ्रान्सको राष्ट्रिय टोलीमा टोटेनह्यामका गोलकिपर ह्युगो लोरिस संगै डिफेन्डरमा मोनाकोका डिजिब्रि, वार्सिलोनाका उम्टिटी, रियल म्याड्रिडका राफिल, म्यानचेस्टर सिटीका वेन्जामिन मेन्डि, एट्लेटिकोका लुकास हर्नान्डेज लगायतका खेलाडीहरु रहेका छन । त्यस्तै मिडफिल्डमा म्यानचेस्टर युनाईटेडका आक्रमक खेलाडी पाउल पोग्वा, वायर्नका टोलिस्सो, युभेन्टसका म्याट्विडी, चेल्सिका कान्टे लगायत रहेका छन भने फरवार्डमा एट्लेटिकोका एन्टोनियो ग्रिजम्यान, चेल्सिका ओलिभर जिराउड, वार्सिलोनाका डेम्बेले, मोनाकोका थोमस लेमर लगायतका उत्कृष्ट खेलाडीहरु रहेका छन ।
विश्वकप २०१८ को पहिलो खेल आयोजक रसिया र साउदि अरेविया बिच नेपाली समयअनुसार विहीबार राति ८ः४५ मा शुरु हुनेछ ।